The Rohingya News Bank : ရိုဟင်ဂျာ Rohingya ( မှတ်မှတ်သားသား )
နောက်တစ်ချက် ကရင်သမ္မတကြီး မန်းဝင်းမောင်လက်ထက်မှာလည်း ရို တွေဟာ တိုင်းရင်းသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ် . ကန့်ကွက်ခဲ့တဲ့ ရခိုင်နိုင်ငံရေးသမား ရှိခဲ့ရင် သက်သေပြပေးပါ ..
နောက်တစ်ချက် 1963 မူဂျာဟစ်လက်နက်ချပွဲ အခမ်းအနားမှာ ရိုဟင်ဂျာတွေဟာ ပြည်ထောင်စုသား တိုင်းရင်း သားများဖြစ်ကြောင်း ဟောကြားခဲ့တဲ့ ဒုကာချုပ် ဦးအောင်ကြီးစကား မဟုတ်မှန်ကြောင်း ကန့်ကွက်ခဲ့တဲ့ ရခိုင်နိုင်ငံရေးသမားရှိခဲ့ရင် သက်သေပြပေးပါ ..
နောက်တစ်ချက် 1974 မှာ ဦးနေဝင်းအစိုးရက ကမ္ဘာ့ကုလထံ ရိုဟင်ဂျာအပါအဝင် တိုင်းရင်းသား 144 မျိုးရှိကြောင်း ပေးပို့ခဲ့စဉ်က ရိုတွေဟာ တိုင်းရင်းသားမဟုတ်သည့်အတွက် ဘာကြောင့်ထည့်သွင်းရသလဲဆိုပြီး ကန့် ကွက်ခဲ့တဲ့ ရခိုင်နိုင်ငံရေးသမားရှိခဲ့ရင် သက်သေပြပေးပါ ....
အရိုးရှင်းဆုံးတစ်ခုကို ပြန်မေးပါမယ် လွတ်လပ်တဲ့ ပါလီမာန်ဒီမိုကရေစီလက်ထက် ဦးနုရဲ့ ပါလီမာန်အစည်း အ ဝေးတိုင်းမှာ ရိုဟင်ဂျာသည် တိုင်းရင်းသားမဟုတ်ကြောင်း ကန့်ကွက်ခဲ့တဲ့ ရခိုင်အပါအဝင် တိုင်းရင်းသားထဲက တစ်ယောက်လောက်ဖြစ်ဖြစ် သက်သေပြပေးပါ ......
အေးတစ်ခုတော့ရှိတယ် ,, ရိုဟင်ဂျာတွေကို လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ နာဇီဥပဒေ 82 နောက်ပိုင်းမှာက ရည် ရွယ်ချက်ရှိရှိ သတ်ဖြတ်မောင်းထုတ်ခဲ့တဲ့ ငြင်းဆိုချက်သက်သေတွေကတော့ ဘောင်မဝင်တော့ပါဘူး ..
ဘာကြောင့်ဆို ဗမာတွေဟာ တို့သဘောထားကို မမေးမြန်းဘူးတို့ ,, ဦးနုက သူ့သဘောနဲ့သူ ရိုတွေကို တိုင်းရင် းသားပေးခဲ့တာတို့ အစရှိသဖြင့် 92 နောက်ပိုင်းရောက်ကာမှ အသံတွေ ထွက်လာနေသည့်အတွက် ပြည် ထောင် စု သားအားလုံး အမြင်ရှင်းစေရန်အလို့ငှာ အထက်ပါမေးခွန်းလေးများအား လေးစားရိုသေစွာဖြင့် မေး မြန်းလိုက်ရပါတယ် 👏👏👏
မည်သူ့ကိုမျှ သာစေ / နာစေလိုစိတ်မရှိပါ . အကယ်၍များ ရိုဟင်ဂျာများသည် တိုင်းရင်းသားများမဟုတ်ခဲ့ပါက ထိုခေတ်အဆက်ဆက်က ကန့်ကွက်ခဲ့သူ ရခိုင်နိုင်ငံရေးသမားများ ရှိခဲ့ပေလိမ့်မည်မှာ ကျိန်းသေပေလိမ့်မည် ..
ခေတ်အဆက်ဆက် ရိုတို့အား ကန့်ကွက်သူမရှိ တိုင်းရင်းသားအဖြစ်လက်ခံခဲ့တာလား ? , ဒီဘက်ခေတ်သော်မှ Icj ရောက်နေသည့် နေဝင်း၏ 82 လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်ရန် ကြံရွယ်ချက် Plan အရ ရုတ်တရက် ထကန့်ကွက်နေကြသည်လားဆိုသည်ကိုတော့ အထက်ပါမေးခွန်းများထဲ၌ မုချဧကန် အဖြေရှိနေပေလိမ့်မည် ..
ဝေနေယျခပ်သိမ်း ငြိမ်းချမ်းကြပါစေ 💙💙💙